जीवन – Page3– Health Post Nepal
२०७७ माघ १५ गते | Thursday, 28 Jan, 2021
खाना, कसरत, ध्यान, आराम र तनाव व्यवस्थापनले बढाउँछ रोगसँग लड्ने क्षमता
संसारभरि कोरोना भाइरस प्रभाव र संक्रमण बढिरहँदा तपाईंलाई आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ताले पक्कै पनि गाँजेको होला। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बारम्ंबार साबुनपानीले हात धुने वा अल्कोहल बेस्ड स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने, हाच्छ्यु गरिरहेका वा...
‘इम्युनिटी पावर’ बढाउन साइक्लिङ गर्दै प्रचण्ड
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि डाइटमा सामेल गर्नुस् यी चिज
होलीमा कोरोना प्रभाव : सावधानी अपनाउन सुझाब
होली अर्थात् फागुपूर्णिमा, नामैले रङको चाड हो भनेर ठम्याउन सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष फाल्गुनशुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने यो पर्व हिन्दूहरूको प्रमुख चाडमध्ये एक हो । वर्षमा एकपटक उमंग बोकेर आउने पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउने चाहना स्वाभाविक छ । तर,...
यी ७ स्वास्थ्य परीक्षण हरेक महिलालाई आवश्यक छ
प्रत्येक वर्ष ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी महिला दिवस मनाइएको छ । एउटी महिलाले जीवनमा अनेक उतारचढावपूर्ण चरण पार गर्छिन्, जहाँ उनले काम र निजी जीवनका बीच सही सन्तुलन बनाउने...
सुन्दर देखिन मेकअप चाहिन्छ र?
कुनै जमाना थियो बलिउड अभिनेत्रीहरू बिना मेकअप सार्वजनिक कार्यक्रम वा क्यामेरा सामु आउन हिचकिचउँथे। अब समय फेरिएको छ। अहिले हिरोइनहरू बिना मेकअप पनि देखिने गरेका छन्। अहिले कसैले बिना मेकअप सेल्फी फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेका हुन्छन् त कोही मेकअप बिनै...
महिलाले आफ्नो पार्टनरबाट गर्ने चार अपेक्षा
भनिन्छ महिलाले धेरै कुरा मनमा राख्न सक्दैनन्। उनीहरू प्राय कुरा अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। तर, पनि उनीहरूको मनमा केही यस्ता चाहना हुन्छन्। जुन उनीहरूले आफ्नो पार्टनरबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर, त्यस्तो चाहनालाई उनीहरूले अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यस्ता छन् महिलाले...
बिहेपछि किन मोटाइन्छ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएको एउटा अध्ययनले नवविवाहितको तौल र मोटोपना बढ्ने गरेको देखाएको छ। द ओबेसिटी जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार बिहेको पाँच वर्ष भित्र करिब ८२ प्रतिशत जोडिको तौल पाँचदेखि दश किलोसम्म बढ्छ। पुरुष भन्दा महिलाको तौल झन् चाँडो...
श्रीलंकाको सौन्दर्य ब्रान्ड ‘हेमास’ नेपाली बजारमा
श्रीलंकाको हेमास ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्री पहिलो पटक नेपाली बजारमा पनि भित्रिएका छन्। नेपालका लागि हेमासको अधिकृत विक्रेता ‘हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क’ प्रालिले ती सामग्रीको बजार प्रवर्द्धन गर्नेछ। ‘नेपालमा भारतीय सौन्दर्य प्रशाधन सामग्रीको वर्चस्व छ। हामीले केही अलग साेंचका साथ...
सुन्दर अनुहारका लागि मेकअप गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
प्राय धेरै महिला मेकअप गर्दा आँखा अथवा ओठ मध्य एक चीज डार्क र एक चीज लाइट गर्नुपर्छ । तर, थुप्रै अभिनेत्री यो कुरामा विश्वास गर्दैनन् । कुनै अभिनेत्रीहरू आफ्नो ओठमा डार्क रेड लिपिस्टिक लगाउँछन् र अनुहारमा हल्का मेकअप गरेर...
धुमपान छोड्दा फोक्सो आफैँ ठिक हुन्छ !
वैज्ञानिकका अनुसार मान्छेको फोक्सोमा जादुमयी क्षेमता हुन्छ । जसले धुमपानबाट हुने कतिपय हानिलाई आफै ठिक गरिदिन्छ । फोक्सोको क्यान्सरका लागि म्युटेशन्सलाई स्थायी मानिन्छ । त्यो धुमपान छोड्दा पनि त्यही रहने विश्वास गरिन्छ । तर, नेचरमा छापिएको शोधका अनुसार केही...
के सेक्सको लत पनि समस्या हो?
अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनको एक कथन प्रचलित छ, ‘चुरोट छोड्न सजिलो छ, जुन काम मैले सयौं पटक गरे ।’ यद्यपि निकै सजिलो पनि छैन जति भन्न सजिलो छ । तर, पछि उनको मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरबाट भएको थियो । एकतर्फ...
यी हुन् शक्रकीट बढाउने खानेकुरा
स्वस्थ सन्तान प्रत्येक दम्पत्तिको चाहना हुन्छ। स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गर्भमा भ्रूण बन्नेदेखि शिशु तयार हुँदासम्म आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुन आवश्यक हुन्छ। गर्भमा शिशुको बृद्धिविकास हुनका लागि पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बबीच...
नियमित यी तीन आसन गर्दा बच्चा पाउन सहज हुन्छ
बच्चा गर्भमा हुँदा महिलाले निकै सास्ति खेप्नु पर्छ । गर्भावस्थामा हुने समस्याबाट बच्नका लागि नियमित योग गर्दा निकै फाइदा पुग्न सक्छ । नियमित योग गर्दा प्रसवको समयमा हुने पीडाबाट पनि केही बच्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले बच्चा गर्भमा हुँदा...
ऋतिक यसरी ‘फिट’ राख्छन् आफूलाई
चर्चित बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनको उमेर ४६ वर्ष भइसकेको छ । उनी ४६ वर्षको उमेरमा पनि निकै फिट छन् ।केही समय पहिले ऋतिक एशियाका सबैभन्दा सेक्सी पुरुषको रुपमा चुनिएका थिए । ऋतिकको जति अभिनय दमदार हुन्छ, उनको नृत्य पनि...
के मानिसको मृत्युपछि पनि शुक्रकीटले काम गर्छ ?
एक अध्ययनमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा वैज्ञानिकहरूको टिमले मानिसको मृत्युपछि पनि शुक्रकीटले काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वैज्ञानिकहरूले मानिसको प्राण गएको ४८ घण्टासम्म शुक्रकीटलाई गर्भधारणमा प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनबाट पुष्टि गरेका हुन् । ‘मानिसको मृत्यु भएको ४८ घण्टासम्म निकालिएको...
‘सेक्स’ नचाहने केटीको कथा
हँसिलो अनुहार, पुष्ट जिउडाल भएकी एक स्टाइलिस केटी सन्ध्या ! उनले आफ्नो उमेर ४० वर्ष भनिरहँदा, कसैले पत्याउँदैनन् । ‘तपाई त मुस्किलले ३० वर्षको जस्तो देखिनुहुन्छ ! ४० वर्षको जस्तो त कुनै कोणबाट पनि लाग्दैन । यसको राज के...
बढी नुन खाँदा लाग्न सक्छ यस्तो गम्भीर रोग
बढी नुन खानु स्वास्थ्यका लागि निकै व्यफाइदा जनक हुन्छ । धेरै नुन सेवन गर्दा मानिसलाई विभिन्न रोग पनि लाग्छ सक्छन् । धेरै नुन खाँदा खानाको स्वाद मात्रै बिग्रीदैन, ब्लड प्रेसर बढ्नुका साथै मुटु सम्बन्धि थुप्रै घातक रोग लाग्ने सम्भावना...
बेसार र दूध सेवन गर्दा फाइदैफाइदा
बेसार र दूध स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक छ । चिसोमा त झनै यसको निकै महत्व छ । जाडो मौसममा चिसोबाट बच्न बेसार र दूध सेवन गर्न चिकित्सकहरूले सल्लाह दिनेगर्छन् । चोटपटक लाग्दा पनि बेसार र दूध सेवन गर्नु राम्रो...
बहुउपयोगी चुकन्दर : हर्टअट्याकदेखि यी रोगमा अचुक फाइदा
चुकन्दरलाई हामी सलादका साथै जुसको रुपमा खान सक्छौं । चुकन्दर स्वास्थ्यका लागि निकै लाभकारी हुन्छ । सुकन्दरले थुप्रै रोगमा औषधीको कामसमेत गर्छ । यदी तपाईलाई खानामा सलाद मन पर्छ भने चुकन्दरलाई पनि सामिल गर्नुस् । किनकी चुकन्दरमा भरपूर मात्रामा...
यौनसम्पर्क गर्न पुरुष र महिलाका लागि सर्वोत्तम समय कुन ?
जीवको वृद्धि–विकासका लागि यौनजीवन अनिवार्य सर्तजस्तै हो । यौन सन्तान उत्पादन वा वंशविस्तारको मात्र होइन, उन्नति, प्रगति र प्रेरणाको स्रोत पनि हो । यौन ऊर्जाको स्रोत हो भन्ने तथ्य अनुसन्धाताले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यस्तै एक तथ्य यहाँ प्रस्तुत...
तनाव हुँदैमा रोग लाग्छ नै भन्ने हुँदैन, तर यसरी बन्छ घातक
सामान्यतया तनावलाई खासै गम्भीर समस्याका रूपमा लिइँदैन । जबसम्म यसले डिप्रेसन तथा मानसिक रोगको रूप लिइसकेको हुँदैन, तबसम्म यसलाई बेवास्ता गरिन्छ । सामान्यखालको तनावलाई दैनिक जीवनको एक हिस्सा सम्झेर बेवास्ता गरिएको हुन्छ । शरीरमा कुनै प्रकारको स्नायु, अन्तस्राव तथा...
वायु प्रदूषणले फोक्सोमा मात्र हानि होइन, डिप्रेसन र आत्महत्या पनि बढाउँछ : अध्ययन
यदि तपाईं वायु प्रदूषणका कारण शारीरिक स्वास्थ्य मात्र प्रभावित हुन्छ भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने त्यो सत्य होइन । प्रदूषणले शारीरिक रूपमा नोक्सानी पुर्याउनुका साथै तपाईंलाई मानसिक रूपमा पनि बिरामी बनाइदिन्छ । हालसालै भएको एक अध्ययनमा विभिन्न १६ देशको तथ्यांकको...
किन हुन्छ पटक–पटक गर्भपतन ? यस्तो छ कारण
संसारमा धेरै व्यक्ति सन्तान चाहँदा चाहँदै पनि गर्भपतन भएर हैरान भएका छन् । यदि कुनै महिलाको ३ वटा भन्दाबढी लगातार गर्भपतन हुन्छ भने त्यसलाई बराबर गर्भपतन भन्दछन् । कुनै–कुनै विद्धानहरुले दुई पटक भन्दा भएकोलाई पनि स्टयान्डर्ड मान्दछन् । यदि...
दाँत र गिजाका सफाइ किन ?
दाँतहरु फोहर भएमा गिजाहरुको संक्रमण प्रारम्भ हुन्छ र गिजा सुनिन्छ । गिजाको रंग गुलाफी नभई रातो हुनु दाँतको बीचको गिजाको अंश बाटुलो हुनु, सास दुर्गन्धित वा मुखको स्नायु बिग्रनु, थिच्दा वा अडकेको टुक्रा भिक्दा गिजाबाट रगत आउने हुन्छ । ...
औँलाहरूको अवस्थाले व्यक्तिको समग्र स्वास्थ्यअवस्थाको आकलन गर्न सकिने विश्वास विज्ञहरूको छ । विज्ञहरू भन्छन्– व्यक्तिको स्वास्थ्यअवस्था उसका औँलाहरूमा पढ्न सकिन्छ । औँलामा प्रतिविम्बित संकेतलाई पढेर सुरुवाती अवस्थामै गभ्मीर रोगको पहिचान गर्न सकेको खण्डमा पछि आउने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ...
तपाईंलाई भोक लाग्दैन ? यस्ता छन् कारण
मानिसलाई बाँच्नको लाथि खानु आवश्यक छ । जन्मने बित्तिकैदेखि नमेरसम्म जीवनयापन गर्न तथा कार्य सञ्चालन गर्न भोजन तथा पौष्टिक आहार जरुरी छ । भोकमा गडबडी हुनु स्नायुसम्बन्धी अन्तरश्रावसम्बन्धी तथा पाचन प्रणलीसम्बन्धि गडबडी भएको हुनसक्छ । कारणहरु १. शारीरिक :निस्क्रीय...
सन्तान नभए के गर्ने ?
एकातिर विश्वको जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र विश्वको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न पा्रय सम्पपुर्ण देशहरुमा स्थायी र अस्थायी साधनहरु प्रयोग गरिएका छन् भने अर्कातिर कतिपय दम्पतीहरु बच्चा नभएर सन्तान प्राप्तिका लागि सबैभन्दा बढी मानसिक चिन्ताका साथै कयौँ रुपिँया...
मर्चवार प्रकरण : हत्याअघि मदिरामा निन्द्राको गोली, ६ अभियुक्त पक्राउ
कोरोना खोप लगाउन पाउँदा भाग्यामानी ठानेको छु : डा. अनुप बाँस्तोला
पहिलो दिन देशभर ९०८४ जनाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, कसैलाई पनि समस्या देखिएन
कोरोना खोपसँगै मुस्काएका स्वास्थ्यकर्मी अनुहार
नेपालमा २८३ संक्रमित थपिए, थप २४६ ले जिते कोरोना
२ हजार ९ सयले लगाए कोरोना खोप, कसैलाई पनि समस्या देखिएन
कोरोना खोप लगाएपछि ८० वर्षे ‘चिकित्सा योद्धा’ ले भने– धेरै बाँच्न मन छ, धेरै काम गर्नुछ
स्वास्थ्यकर्मीलाई आएको खोप मन्त्रीले लाएपछि…
भक्तपुर अस्पतालमा मेसु गौतमले लगाइन् पहिलो खोप
निर्धक्क भएर खोप लगाए : डा. सागरराज भण्डारी
बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ भगवान कोइरालाको स्वास्थ्यमा समस्या
पाटनजस्तो अस्पताल अनि युवराजजस्ता डाक्टर भए पो!
नर्भिक हस्पिटलले ठुलो संख्यामा माग्यो स्टाफ नर्स र पारामेडिक्स
टिचिङ अस्पतालमा कोभिड आइसियुमा खटिएका चिकित्सकमाथि आक्रमण